यदि तपाईको हातमा ‘X’ चिन्ह छ भने तपाईमा छ यस्तो खास राज, जान्नुहोस् के हो त त्यो ? – Krazy NepaL
यदि तपाईको हातमा ‘X’ चिन्ह छ भने तपाईमा छ यस्तो खास राज, जान्नुहोस् के हो त त्यो ?
March 13, 2021 1206
एजेन्सी । ज्यातिष विद्या यस्तो विद्या हो जसले केहि न केहि तरिकाबाट मानिसको भविष्य बताउँछ । पछिल्लो समयमा यो विद्या प्रमाणित पनि भइसकेको छ । विभिन्न तरिकामध्ये ज्योतिष विद्याको एक तरिका हो हस्त रेखा । यहि रेखाको माध्यमबाट ज्योतिषले तपाईको आफ्नो जीवनको बारेमा धेरै कुरा बताउँछन् ।
हस्तरेखाको अनुसार पुरुषको दायाँ हात र महिलाको बायाँ हातको रेखा हेर्ने गरिन्छ । हरेक व्यक्तिको हत्केलामा विभिन्न प्रकारका हस्तरेखाहरु हुन्छन् ।
आज हामी तपाईलाई हत्केलामा भएको यस्तै एउटा रेखाको बारेमा बताउँन गइरहेका छौ ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
के हो हस्त रेखा ?
हस्तरेखा शास्त्रको प्राचिन ज्ञानको आधारमा हत्केलाको रेखा मानिसको व्यक्तित्व र भविष्यको सम्भावना जस्तै करियर , जीवन , विवाह, धन र स्वास्थ्यसम्वन्धी विभिन्न कुराहरु बताउँछ ।
हातको रेखा हेरेर भविष्यको अनुमान लगाउन सकिने हजार वर्ष पहिलेनै हिन्दू ऋषि बाल्मीकिले ५६७ छन्द युक्त एक गन्थ्रमा उल्लेख गरेका थिए ।
हत्केलामा x हुनु
मिस्रका विद्वानका अनुसार सिकंदर महानको हातमा पनि यस्तो चिन्ह देखिएको पाइन्छ । सिकंदरको हत्केलामा बाहेक यस्तो चिन्ह अन्य व्यक्तिको हत्केलामा समेत देख्न सकिन्छ । जुन संसारमा ३ प्रतिशत मानिसको हत्केलामा मात्र पाउँन सकिन्छ ।
भर्खरै हत्केलामा x रेखाको बारेमा जानकारी र यस्तो रेखा हुनेहरुको भाग्यको बारेमा गरिएको एक रिर्सच गरिएको थियो मास्को यूनिभर्सिएटीमा । उक्त रिर्सचले एक पेपरनै निकालेको छ ।
उक्त विश्वविद्यालयमा भएको शोधमा शोधकर्ताले २ मिलियन मानिसको बारेमा जानकारी एकिकृत गरेका थिए । जसमा जीवित वा मृत दुवै मानिसमा गरिएको उक्त शोधका अनुसार जुन मानिसको हातमा ह चिन्ह हुन्छ उनीहरु ठूला नेता हुने , कोहि व्यक्ति लोकप्रिय वा कोहि व्यक्ति ठूला–ठूला कामको लागि प्रसिद्ध भएको भेटिएका थिए ।
के हो यसको अर्थ
जुन व्यक्तिको दुवै हातमा यस्तो रेखा हुन्छ उनीहरु ठूलो काम गरेर प्रसिद्ध हुने तथा मरेपछि पनि यादगर हुने गर्छन् । जुन व्यक्तिको एउटा मात्र हत्केलामा यस्तो चिन्ह हुन्छ उनीहरु प्रतिष्ठित हुने र सफलताले उनीहरुको कदम कदममा चुम्ने बताइन्छ ।
Prevखुइलिएको तालुमा घरमै बसी कपाल उमार्ने यो हो सजिलो घरेलु उपाय
Nextयी ३ राशि जसको सानै उमेरमा धेरै धनी बन्ने योग हुन्छ !
भिन्डी खाने ९९ प्रतिशत व्यक्तिले गर्छन् यी २ गल्ती, जसले देखिनसक्छ यस्तो समस्या
२ दिन भित्र खाद्यान्नको जोहो गर्न अनुरोध, अब १ हप्ता ठप्प पारिने
यस समयमा गर्भमा आएका बच्चा हुन्छन् निकै भाग्यशाली !